Nosy Be Hell Ville: MD ireo mpivady saika hitondra olona hihazo an’i La Réunion - ewa.mg
Nosy Be Hell Ville: MD ireo mpivady saika hitondra olona hihazo an’i La Réunion
News - Nosy Be Hell Ville: MD ireo mpivady saika hitondra olona hihazo an’i La Réunion
am-ponja (MD), afakomaly ao Nosy Be Hell Ville, ireo mpivady saika
hitondra antsokosoko olona hiainga avy ao Nosy Be hihazo ny Nosy La
Noraisim-potsiny! Voasambotry ny
polisin’ny Paf (polisy miasa eny amin’ny seranana) Nosy Be, ny
alahady 9 aogositra 2020 teo, ireo mpivady mpisoloky misera sy
mitondra antsokosoko olona tamin’ny sambo mpitondra olona
mpitsangantsangana. Nentina avy hatrany nanaovana fanadihadiana
tany amin’ny polisy izy mivady ireto. Niroso tamin’ny fisavana ilay
sambo ny polisy ka olona miisa 14 ny hita tao anaty sambo, saika
hiondrana hihazo ny Nosy La Réunion, araka ny fanazavana. Navoaka
avy ao anaty sambo ireo olona nikasa hiondrana antsokosoko ireto.
Natolotra ny fampanoavana, afakomaly, kosa izy mivady ka niafara
tamin’ny fampidirana vonjimaika am-ponja. Manolotra fisaorana ireo
olona nanome loharanom-baovao mikasika ity fikasana hitondra
antsokosoko olona hiala an’i Madagasikara ity ny polisin’ny Paf ao
Nosy Be. Mbola nanamafy hatrany rahateo ny polisy fa voararan’ny
lalàna ny fitondrana antsokosoko olona miala an’i Madagasikara,
indrindra amin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina
Coronavirus izao. Na eo aza anefa izany, tsikaritra fa mbola mitady
hirika hatrany ireo olona sasany hitondrana ireo olona mivoaka ny
L’article Nosy Be Hell Ville: MD ireo mpivady saika hitondra olona hihazo an’i La Réunion a été récupéré chez Newsmada.
LOKANGA SY VALIHA
Raha toham-baliha iray no hamalan-kira…Fa iza sy aiza marina ny tena mpanohitra izao fitondrana izao? Akaiky ny lela indrindra ny hanonona ny antoko Tim sy ny HVM, izay samy naorin’ireo filoham-pirenena teo aloha. Fotoana izao, hanehoan’ny mpanohitra ireo kiana hanatsaran-javatra, ireo olana arahim-bahaolana. Fotoana ihany koa mba hanomezana fofompofony sahady izay olona heverin’izy ireo fa hahavita izay mety, rehefa mby eo amin’ny fitondrana (indray) izy… Inona tokoa moa no antom-pisian’ny antoko politika iray, raha toa ka tsy mikatsaka ny hitantana firenena? Tsy ny hitondra ny anjara biriky heverina fa mahasoa ny tanindrazana ve ny tanjona? Tsy ny fandraisana anjara amin’ny antanan-tohatry ny fifidianana rehetra ve ny lalana hahatongavana amin’izany? Fa tsy izay no mitranga. Tsy handray anjara amin’ny fifidianana loholona ny antoko Hvm. Tsy mety amin’izy ireo ny fomba hitondran’ny fitondram-panjakana izany. Ao akaiky ao, mbola mitady izay paikady mety hamerenany indray ny tanjany ny antoko Tim. Mijery ny lasa, maka lesona, maka bahana, sa miandry tataka? Tsy mbola tsinjotsinjo koa aloha izay tena mpitari-tafika halefa aloha eny an-tsahan’ady… Ka iza sa inona ary no olana misakantsakana ny fampandrosoana amin’izao fotoana izao? Rehefa tsy misy olona ivelany hotondroina molotra, tsy maintsy mifampijerijery ny ao an-trano. Mifampiahiahy, mifampiandry kendry tohina… Ny tahotra ny raiamandreny sisa no tsy hifandroritam-bolo indraindray. Noho izay ihany koa no mbola hisian’ny sarin­tsarim-pihavanana ambadiky ny tena ady zara raha miafina. “Ireo fa miady an-trano”, hoy ny mpitazana e! Mpitazana izay efa miandry fotsiny an’izany koa. Hikoha-maina aza hatao, koa mainka fa misy rehoka kely? Misia mibolisatra eo fa “tsaky” any anaty tambajotran-tserasera mandritra ny fotoana maharitra, mandra-pisian’ny tranga manaitaitra vaovao indray… Taloha mbola tsy ela, izay mibolisatra harenina, na tsy mitovy firehana aza. Taloha vao aman-taonany fotsiny izay, izay lavo tsy hitsahina, satria tsy fahavalo fa mpifanandrina. Ny amin’izao, izay ivelan’ny trano, efa raisin-ko fahavalo ho azy. Ny ao an-trano aza, misy tsy miray lambanana, misy tsy sahy mitodi-doha, sao hisy handefona ivoho… Sahirana ny raiamandreny… Vaky loha satria manomboka tsapa sy hita maso ny ankisisika amin’ny ady fitia. Samy te ho lohany, samy te ho sangany, hany ka mifanitsaka andraikitra, na samy miala andraikitra. Iny vita ihany, fa ilay manao izay haminganana ny namana, ny rahalahy sy ny rahavavy no tena mamohehatra. Iray donakafo no tiana seho ivelany, kanefa vovonan’ny mpirafy ny ao anatiny. Misy ao ny fandoto iray tandroka e! Misy ny tsy indray mifoha, misy ny voankazo lo, fa indrindra indrindra ny mpamalan-kira. Tsy avy any ivelany ireny nahatrarana lavaka ara-bola, vaky barara ka nandraisan’ny fitondrana fepetra ireny. Mpanapaka tao ambony tao ihany, ary olona nomem-pitokisana. Olona ao an-trano ireo nanipy hoditra akondro, nampijabaka ny mpitondra tamina sehatra maro. Mbola samy mpanara-dia ihany koa ireo mifandrirotra ny faritra niaviany, ho Vatovavy sa ho Fitovinany? Zaza notaizana ihany koa ity no mitsivalana ho sakana, amin’ny fampandrosoana ny Tanàna. Ny fanapahana arahim-pahendrena, izay no andrandraina amin’izay mitondra. Sarotra ny fandidiana, mampahatsiahy ireo vehivavy roa niady zaza, tamin’ny andron’ny Mpanjaka Salomona, nalaza ho marani-tsaina sy be fahendrena. Rehefa nanenjana izy, tsapany ihany hoe iza no manao ny mety, iza kosa no mpamorika. Raha mpanohitra mijoro amin’ny antom-pisiany, mahalala tsara fa mandray anjara amin’ny fampandrosoana izy, fa tsy ho sakana mihitsy. Mahita ny tsy mety mila harenina ary manana vahaolana amin’izay mety ho sakana. Tsara iaraha-miasa ireny! Fa raha hita maso, henon’ny sofina ary voamarina kosa fa misy toham-baliha mamalana ny hira iarahana, dia ho mena-miteny ve? Ny rehetra anie no ho voatondro molotra ho samy tsy mahay e! “Atsipazo lavitra any, avalano rano”, hoy ny hiran’ny tarika Miray izay. Teny atsipy, hevitra angona tetsy sy teroa, fijerin’ny vitsy nefa mety iombonana amin’ny maro izany. Tsy misorona, tompoko. Zo ny Aina RandriatsiresyL’article LOKANGA SY VALIHA a été récupéré chez Newsmada.
Saika handroba fiara nitondra volabe…: raikitra ny fifampitifirana, jiolahy roa lavon’ny polisy
Nirefodrefotra ny basy tetsy Ambodimita, omaly tolakandro. Saika handroba fiara iray nitondra volabe ireto jiolahy efatra nitam-piadiana mahery vaika. Lavon’ny balan’ny polisin’ny BC sy Sag, vokatr’izany, ny roa tamin’ireo olon-dratsy, raha azo sambo-belona niaraka tamin’ny basy PA kosa ny iray. Nisehoana fanafihana nitam-piadiana nahafatesana jiolahy nitam-piadiana miisa roa tetsy Ambodimita, omaly. Fiara mitondra ny marika Kangoo iray handeha hanatitra “versement” niala tetsy 67 ha ny narahin’ny jiolahy niisa efatra. Nanoloana io anefa, nanara-maso ireo olon-dratsy ireo koa ny eo anivon’ny Sag (Service anti-gang) eo anivon’ny Polisim-pirenena. Rehefa tonga teo amin’ny lalana Ambodimita, nanakana avy hatrany ilay fiara narahiny ireo jiolahy nitam-basy ary nikasa haka ny vola tao anaty fiara. Tetsy ankilany, efa tsy lavitra teo ny polisy namandrika azy ireo ka nandray ny andraikiny avy hatrany. Kinanjo, namaly tifitra variraraka ireo jiolahy ary nanohitra ny polisy sy nanao tongotra ankatoka. Niezaka nisambotra ireo olon-dratsy, noho izany, ny Sag ka maty voatifitra ny roa amin’ireo jiolahy raha toa ka azo sambo-belona ny iray. Tafatsoaka kosa ny iray izay voalaza fa nitondra basy Kalachnikov. Marihina fa efa voatifitra io jiolahy iray nandositra io ary nifanenjehan’ny polisy. Nahatrarana basy PA iray niaraka amin’ny bala teo amin’ireo roa voatifitra. Tsy nisy lasa kosa ny vola tao anatin’ilay fiara narahin’ireo andian-jiolahy ireo. Efa narahi-maso fatratra…Vantany vao niala teny amin’ny faritr’i 67 ha ny tolakandro, efa nahin’ny polisy ny fihetsika nasehon’ireo olon-dratsy ireo. Nanampy trotraka ny firongatry tsy fandriampahalemana eny amin’iny faritra iny ka nataon’ny Sag andrimaso ireto jiolahy ireo. Ora vitsy taorian’io, tsikaritra fa nanaraka ilay fiara Kangoo izy ireo ary nandrasan’ny polisy kendry tohina teo Ambodimita. Fantatra fa tena jiolahy tokoa izy efatra mirahalahy ireo ary namoaka basy Kalachnikov sy PA iray. Heverina fa isan’ireo jiolahy mpanatontosa fanafihana mitam-piadiana eto an-dRenivohitra ireto andian-jiolahy ireto. Andrasana ny tohin’ny raharaha amin’izao fotoana izao.Tsiferana RandriatianaL’article Saika handroba fiara nitondra volabe…: raikitra ny fifampitifirana, jiolahy roa lavon’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Taekwondo-Analamanga: nahomby ny fifaninanana
Tontosa tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny faran’ny herinandro teo, ny Open Analamanga, taranja taekwondo. Miisa 300 ireo mpikatroka nandray anjara avy amin’ny seksiona dimy (ny Renivohitra, i Manjakandriana, Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo) tao anatin’ny klioba 17, nisy mpikatroka avy any amin’ny ligim-paritra hafa, toa an’i Matsiatra Ambony, i Vatovavy Fitovinany ary Atsinanana ihany koa nandray anjara tamin’izany. 68 sokajy moa ny nifaninanana tamin’ity, nanomboka amin’ny “poussin” hatrany amin’ny “seniors” lahy sy vavy. Nambaran’ny filohan’ny ligin’Analamanga, Rakotomanana Franck Tiana, fa somary mareforefo ity taranja ity ary tao anatin’ny taona iray mahery no tsy nisy fifaninanana ka natao izao « open » izao. “Hahafahana mampakatra ny haavo teknika izay hita ho nilatsaka be koa ny nanaovana ny hetsika toy izao”, hoy izy. Nanampy sy nanohana azy ireo tamin’ny fanatanterahana ity hetsika ity ny CUA, ny MCC, ny hotel Little India, ny Tometal, ny Lakanjejo sy ny Galax. Raha ny valin-dalao, nisongadina ny klioban’ny CTM sy ny Lion. Namiratra ihany koa anefa ireo klioba sasany avy any amin’ny faritra. Mi.RazL’article Taekwondo-Analamanga: nahomby ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
News - Téchnologie
Inona no atao hoe 5G
Lasa resabe teto amin'ny firenena tato ho ato ny resaka 5G rehefa nilaza ny orinasam-pifandraisan-davitra iray hoe hametraka azy. Fotoana fohy taorinan'io dia nilaza ry zareo tao amin'ny ARTEC fa hajanona aloha ny andrana 5G eto Madagasikara. Tao anatin'izany vaovao maro izany dia milaza ry zareo ao amin'ny Sekoly Ambony Polyteknika an'Antananarivo amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny mombamomba ny 5G. Io manaraka io ary ny fanambaran'izy ireo. Ny 5G dia fivoaran'ny teknolojiam-pifandraisan-davitra. Nisy ny 2G-3G-4G (générations) ary izao dia fotoan’ny 5G. Azo lazaina ho fiovana ara-teknolojika mihitsy aza satria nampiana ireo tolotra azon’ny mpanjifa ampiasaina, navaozina koa ny teo amin’ny lafiny ara teknika. Tombontsoa maro no azo avy amin'ny 5G raha tsy hiteny hafa tsy ny sehatry ny aterineto noho izy haingam-pandeha raha mihoatra amin’ny teknolojia hafa. Azo atao koa ny manatsara ny fifamoivoizana (fandaminana ny fitohanan’ny fiara …), ny fandriampahalemana, ny fahasalamana, ny asa tena sy ny asa amina orinasa, ... Miaraka amin’izany koa dia fitaovana sy foto-drafitr’asa maro no hifandray ka hanampy ny mpiara-belona. Araka ny tsoa-kevitra navoakan'ny OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ao amin'ny tranokalany (https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index1.html) dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana ny teknolojia mampiasa "ondes électromagnétiques", isan'izany ny 5G. Fikarohana maherin'ny 25000 no namoahan’ny OMS (Organisation Mondiale de la Santé) izany tsoa-kevitra izany. Tiana ny manamarika fa : - Tsy manimba na manaratsy ny 3G sy ny 4G efa misy ny fahatongavan'ny 5G. Atokisana tanteraka ny injeniera navoakan'ny Sekoly Ambony Polyteknika an'Antananarivo amin'ny fahafahezana ireo. - Ny 5G sy ny tombontsoa entiny dia tafiditra anatin’ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny teknolojia vaovao araka ny ODD (Objectifs de Développement Durable) sy ny vinan'ny IEM (Initiative pour l'Emergence de Madagascar). - Tsy misy ifandraisany mihitsy ny 5G sy ny Covid-19 Mba ahafahana mametraka ny 5G eto amintsika dia tokony hanaraka amin’ny antsipirihany ny bokin'andraikitra izay efa napetraka mialoha ny mpisehatra rehetra momba ny 5G. Ny fanjakana sy ny ARTEC (Autorité de Régulation des Technologies de Communication) no manaraka akaiky ny fampanajana izany. Ankasitrahana ny hisian’ny ny fifaninana malalaka eo amin'ny mpisehatra rehetra momba ny 5G. Raha misy ny olana dia entanina ny "opérateurs" sy ny fanjakana hifampidinika mba tsy ho sakana ho an'ny fampandrosoana tian-kajoro izany. Farany, ny Sekoly Ambony Polyteknika an'Antananarivo dia vonona hatrany amin’izay mety ho fiaraha-miasa tiana hatao mahakasika ny 5G noho ny fisian’ny toeram-mpampianarana sy toeram-pikarohana momba ny fifandraisan-davitra ao aminy. Nalaina avy amin'ny pejy facebook-ny Sekoly Ambony Polyteknika an'Antananarivo.